Semalt: Comment Le Marketing Site Email Se Rapporte À La SEO
Nchọnchọ Nchọpụta Mmasị na-adabere na isi isi ihe abụọ, nke na-eme ka arụmọrụ nke saịtị weebụ yana nleta na saịtị ahụ. The optimization on the site na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, na-arụ ọrụ, na ihe ndị na-adabere na isiokwu dị mkpa maka ụlọ ọrụ na ndị ọrụ ya. Ntughari na-abụghị saịtị na-ezo aka na akwụkwọ mbipụta na ndị na-abanye na ntanetị ndị na-eduga ndị na-eme njem na saịtị. Email na-emetụta SEO site na abụọ ndị a.
Jack Miller, onye nchịkwa nke ahịa ahịa nke Semalt , kọwaa nkọwa na ahịa campagnes site na ozi emetụta kpọmkwem gị arụmọrụ SEO ma yabụ.
Mgbasa ozi campagnes site na email na-emetụta kpọmkwem nchịkọta nke search engines maka ihe ndị a:
Entrants incoming The échelle d'autorité de domaine dicte la performance sur le moteur de recherche en determining the number of links that direct people to a site, di diversité et haute ikike nke isi ebe obibi. Idozi ndị na-abanye na ntanetị na-enyere gị aka iru ọkwá. Email na-emetụta ndị otu site na ịmepụta ndị na-adọrọ mmasị na ozi na saịtị ahụ, nke na-eme ka ohere inweta ndị a na-aga n'ihu n'ọdịnihu.
Nkwalite nke ọdịnaya. Email ahịa na-eme ka ihuenyo zuru oke dị elu. Dịka ọmụmaatụ, mmadụ ịbanye na blọọgụ blog ma ọ bụ ọnwa ọ bụla na-egosi ozi ndị kachasị, na-eme ka azụmahịa dịkwuo elu.
Njikọ aka na saịtị ahụ Google na-achọpụta ma ọ bụ na-achọpụta na ọ bụ site na saịtị na-ezigara ya na ndị ọrụ. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịnweta ọrụ nke ndị ọrụ, nhazi ọchụchọ maka weebụ ga-abụ nke dị elu karịa ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọha na eze na-arụ ọrụ..
Nke a bụ ihe abụọ secondaire nke na-eme ka nchịkọta nke nchịkọta nke saịtị site na marketing site Email:
Engagement in the mediaias sociales. Les activités des médias sociales enweghị mmetụta na ntinye. Otú ọ dị, onye na-ekesa ọdịnaya na ịmepụta akwụkwọ banyere les mediaias sociales pụtara na akara ahụ ruru ọha na eze buru ibu. Nke a na-eme ka ọ dịkwuo ike, na-eme ka a na-enwe ohere ma gbakwunye ndị mmadụ na-abanye na profile.
Ọ bụrụ na ị na - azụ ahịa, ị ga - azụlite ndị ahịa ọhụrụ ma chekwaa ndị dị ugbu a. Ọ bụrụ na ndị ọzọ enwee ike ịchọta ihe dị iche iche, ha nwere ike ime ka ndị mmadụ nwee nsogbu.
Considération long-term. Les statistic recupeies sur la base de la campagne de marketing site na e-mail na-enyere ndị mmadụ aka ịmepụta ihe ndị dị na ogologo oge. Site n'iji ozi a, ọ ga-enwe ike ịchọpụta ihe ndị ị na-eme na ide na ozi ndị kachasị.
Ntuziaka maka mmeri
Ekwela ka ị na-ere otu ihe ọhaneze. Kama nke ahụ, lekwasị anya na ihe ọmụmụ, ihe onwunwe na ọbịbịa nke mbụ.
Kwesịrị ka ndị na abonnés jikọọ na adreesị ozi-e, bụ ndị nwere mmasị.
Na-eziga ọtụtụ ozi ịntanetị nwere ike ime ka ndị na-abanye na-abanye. The content en vrac bụ ennuyeux na ndị mmadụ nwere ike na-ele dị ka a spam. Debe ọdịnaya dị na ihe dị mkpa.
E kwesiri ịdị na-arụ ọrụ. Ihe ndị a na-eme na ozi ndị ọzọ na-ezite ozi ọma, na-enye nkọwa nke ụzọ mmadụ si emeso ma ọ bụ mmekọrịta ya na isiokwu dị na ya.
Google adịghị rampe pas na e-mail. Otú ọ dị, ozi-e site n'ịntanetị abụghị obere ihe na-adịghị mkpa maka ntinye aha ozugbo ọ nwere ike imetụta àgwà nke ndị ị na-abanye, nke nwere ike ịbawanye elu, ma ọ bụ belata nhazi gị. Ndị ahịa nke Semalt egosipụtawo uru nke ozi ahịa site na mail site na ụlọ ọrụ ntọala nke ụlọ ọrụ.